Re - クロアチア語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: re (クロアチア語 - ビルマ語)
Uznastoj da kao prokuan stane pred Boga kao radnik koji se nema èega stidjeti, koji ispravno ree rijeè istine.
သင်မူကား၊ ဝန်ခံတော်မူသောသူ၊ ရှက်ကြောက် စရာအကြောင်းမရှိဘဲ၊ သမ္မာတရားကို မှန်ကန်စွာ ပိုင်းခြားတတ်သော ဆရာသမားဖြစ်လျက်၊ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆက်သခြင်းငှါ ကြိုးစား အားထုတ် လော့။
"Jer, gle, zapovijed æu dati i rastresti dom Izraelov meðu sve narode, k'o to se trese ito u reetu, da ni zrnce na zemlju ne padne.
တဖန် ငါအမိန့်တော်ရှိသဖြင့် ဆန်ကို ဆန်ခါနှင့် ချသကဲ့သို့၊ ဣသရေလအမျိုးကို ခပ်သိမ်းသော အမျိုးတို့တွင် ဆန်ခါနှင့်ငါချမည်။ ဆန်တစေ့မျှ မြေသို့မကျရ။
Rièe li lav u umi ako plijena nema? Rei li laviæ u brlogu ako nita ne ulovi?
ခြင်္သေ့သည် ဘမ်းစရာမရှိလျှင်၊ တော၌ဟောက်လိမ့်မည်လော။ ခြင်္သေ့ပျိုသည် အဘယ်အရာကိုမျှ မဘမ်းမိလျှင်၊ တွင်းထဲက အသံပြုလိမ့်မည်လော။
Na klijetima i njihovim dovracima, s unutranje strane sve uokolo,atako i u trijemu, bijahu prozori s reetkama. Takvi su prozori bili iznutra, sve naokolo,ana polustupovima palme.
အခန်းများ၊ တံခါးအတွင်းပတ်လည်တိုင်များ၊ တံခါးမုတ်များ အတွင်းဘက်၌ ကျဉ်းသောပြတင်းပေါက် များရှိ၏။ တိုင်များ၌စွနပလွပင်ပုံထုလျက်ရှိ၏။
Rika mu je k'o u lava i rièe k'o lavovi mladi, rei, grabi plijen i odnosi,anikoga da mu ga istrgne.
သူတို့အသံဗလံသည် ခြင်္သေ့ဟောက်သံနှင့်တူ၍၊ ခြင်္သေ့ပျိုကဲ့သို့ ဟောက်ကြလိမ့်မည်။ ဟောက်လျက် အကောင်ကိုဘမ်း၍ ဆောင်သွားကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူ မျှ မကယ်မနှုတ်ရ။
Da, ovako mi reèe Jahve: Kao to lav ili laviæ nad plijenom rei, pa i kad se strèi na njega mnotvo pastira, on se ne prepada vike njihove, nit' za njihovu graju mari - tako æe Jahve nad Vojskama siæi da vojuje za goru Sion, za visinu njezinu.
ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားမိန့်တော်မူသည် ကား၊ ခြင်္သေ့နှင့် ခြင်္သေ့သငယ်သည် လုယူရာ အကောင် ပေါ်မှာနေသောအခါ၊ သိုးထိန်းအလုံးအရင်း၏ ဆီးတား အော်ဟစ်ခြင်းကို မကြောက်၊ သူတို့ပြုသောအသံဗလံအား ဖြင့် အရှုံးမခံသကဲ့သို့၊ ထိုနည်းတူ၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားသည် မိမိတောင်တည်းဟူသော ဇိ အုန်တောင်တော်ဘက်မှာ စစ်တိုက်ခြင်းငှါ ဆင်းသက် တော်မူလိမ့်မည်။
pragovi, prozori s reetkama i hodnici na sve tri strane uokolo, nasuprot pragovima, bijahu sve uokolo drvetom obloeni od zemlje do prozora. Prozori su bili zastrti.
အတွင်းဗိမာန်နှင့်တန်တိုင်မုတ်များ၊ တံခါးခုံ များ၊ ကျဉ်းသော ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးခုံရှိသမျှ တဘက်တချက်သုံးဆင့်ရှိသော ထရံအခန်းနံရံများတို့ သည် မြေမှပြတင်းပေါက်တိုင်အောင် ပျဉ်ပြားနှင့်ဖုံး အုပ် လျက်ရှိ၏။ ပြတင်းပေါက်တို့သည်လည်း ကွယ်ကာလျက် ရှိကြ၏။
Prozori s reetkama i palme bijahu s jedne i s druge strane na trijemu, u poboènim prostorijama Doma i na nadstrenici.
မုတ်နံရံ၊ အိမ်တော်အခန်းထရံတို့သည် ထုပ်များ၊ ကျဉ်းသော ပြတ်တင်းပေါက်များ၊ စွန်ပလွံပင်များနှင့် ပြည့်စုံကြ၏။
Dragi je moj kao srna, on je kao jelenèe. Evo ga za naim zidom, gleda kroz prozore, zaviruje kroz reetke.
ငါချစ်ရာသခင်သည် သမင်ဒရယ် သငယ်နှင့် တူ၏။ ကြည့်ပါ။ အုတ်ရိုးပြင်မှာရပ်တော်မူ၏။ ပြတင်း ပေါက်ဝတွင် ကြည့်လျက်၊ ပြတင်းရွက်ကြားမှာ ကိုယ်ကို ပြလျက်နေတော်မူ၏။
Dah mu je kao potok nabujali to do grla see. On dolazi da prosije narode reetom zatornim, da stavi uzde zavodljive u èeljusti naroda.
ထွက်သက်တော်သည်လည်း၊ လူမျိုးတို့ကို ရှင်း ရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါ၊ လွှမ်းမိုးသောရေကဲ့သို့ လည်ပင်းကို မှီလိမ့်မည်။ လမ်းလွဲစေသောဇက်ကို သူတို့ပစပ်၌ ခွံ့တော် မူလိမ့်မည်။
U dan onaj reat æe na njega k'o to more buèi. Pogleda li zemlju - sve tmina, tjeskoba, svjetlost proguta tmina oblaèna.
ထိုကာလ၌ သူတို့သည် သမုဒ္ဒရာ အသံဗလံ ကဲ့သို့ ဟုန်းဟုန်းမြည်ကြလိမ့်မည်။ ထိုပြည်ကိုကြည့်ရှုလျှင်၊ မှောင်မိုက်အတိ၊ ဒုက္ခဆင်းရဲသက်သက်ရှိ၍၊ မိုဃ်းကောင်း ကင် အလင်းသည် ကွယ်ပျောက်လိမ့်သတည်း။
Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $RE
သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အစဉ်အမြဲထား တော်မူကြောင်းကို၊ ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ အကျွန်ုပ်သိပါ၏။
Kad bijah jednom na prozoru svoje kuæe i gledah van kroz reetku,
ငါ့အိမ်ပြတင်းရွက်ကြားမှ ငါကြည့်၍မြင်ရသော အမှုဟူမူကား၊
U Jahvu se uzdaj i dri se puta njegova: on æe te uzvisit' i batinit æe zemlju; radostan æe gledati propast bezbonih. $RE
ထာဝရဘုရားကို မြော်လင့်၍၊ လမ်းတော်ကို ရှောက်သွားလော့။ ပြည်တော်ကို အမွေခံရသောအခွင့်နှင့် ချီးမြှောက်တော်မူမည်။ မတရားသောသူတို့ ဆုံးရှုံးခြင်းကို သင်သည် ကြည့်မြင်ရလိမ့်မည်။
Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $RE
အကျွန်ုပ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့် ပူပန်ခြင်းကို ကြည့်ရှု၍၊ အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို လွှတ်တော်မူပါ။
On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo æe se èelo slavno uzdiæi. $RE
သူသည် စွန့်ကြဲပြီ။ ဆင်းရဲသော သူတို့အား ပေးကမ်းပြီ။ သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အစဉ်အမြဲ တည်တတ်၏။ သူ၏ဦးချိုသည် ဂုဏ်အသရေနှင့် ချီးမြှင့် ခြင်း ရှိလိမ့်မည်။
On posla spasenje svom narodu, $SADE Savez svoj postavi zauvijek: $KOF sveto je i èasno ime njegovo! $RE
မိမိလူတို့၌ရွေးတော်မူခြင်း ကျေးဇူးကို ပြုတော် မူ၏။ ပဋိညာဉ်တရားတော်ကို အစဉ်အမြဲ ထားတော် မူ၏။ နာမတော်သည် သန့်ရှင်း၏။ ကြောက်ရွံ့ရိုသေဘွယ် ဖြစ်၏။
Zato da bezbonik prezire Boga, zato da kae u srcu: "Neæe kazniti!" $RE
မတရားသောသူသည် ဘုရားသခင်ကို အဘယ် ကြောင့် မထီမဲ့မြင်ပြုရပါအံ့နည်း။ ကိုယ်တော်သည် စစ်တော်မမူဟု အဘယ်ကြောင့် အောက်မေ့ရပါအံ့နည်း။
Blizu je Jahve onima koji su skrena srca,aklonule due spasava. $RE
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် များစွာသော ဒုက္ခ ဆင်းရဲကို ခံရသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်း သောဒုက္ခဆင်းရဲ ထဲက ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. $RE
ထာဝရဘုရားသည် ပဌနာပြုသောသူအပေါင်း၊ သစ္စာနှင့်တကွ ပဌနာပြုသော သူအပေါင်း တို့၏ အနီးအပါးရှိတော်မူ၏။
1 don't love you (英語>ベンガル語)my name is prajwal (ネパール語>韓国語)namta english (ベンガル語>英語)finitimarum (ラテン語>イタリア語)bonpoc (ロシア語>英語)hbw (英語>フランス語)student diversity (英語>タガログ語)penggiat seni dan kebudayaan (マレー語>英語)wastong baybay (英語>タガログ語)código postal (スペイン語>英語)pasang mata (マレー語>簡体字中国語)sanskrit essay onabicycle (英語>ヒンズー語)mabuti alam mo (タガログ語>英語)retroactively (英語>アラビア語)uzile (スワヒリ語>英語)बीपी पिक्चर , (英語>ヒンズー語)halimbawa ng jargon sa accountancy (英語>タガログ語)imlak frasa (マレー語>簡体字中国語)slogan tungkol sa lahi (タガログ語>英語)kukosa kujali (スワヒリ語>英語)humiliation (英語>スワヒリ語)ischiocrurali (イタリア語>英語)sankramika roga (カンナダ語>英語)non quam postea (ラテン語>英語)bureau of fisheries and aquatic resources (英語>タガログ語)